ဆီးဖြူငကြောင်အိပ်မက်အကြောင်း(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဆီးဖြူငကြောင်အိပ်မက်အကြောင်း(၂)
Posted by ကြောင်လေး on Aug 27, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Drama, Essays.., Society & Lifestyle |7comments
တရံရောအခါ ငကြောင်သည် မခံနိုင်ရွေ့ ထွက်သွားပြီးလျှင် အမတ်မင်းထံ သွားရွေ့ခုံလှုံအိ၊ အမတ်မင်းလည်းသနားသဖြင့်ဒရိုင်ဘာခန့်လေအိ။ အမတ်မင်းသည်လည်း ကားဂိုထောင်သို့ မိန်းမအားမကြာခဏ ခေါ်လာပြီး မကြာခင်ကမှ ပါမစ်ရထားသော ချယ်ရီကားလေးအား ပြကာပြကာကြွားလေအိ။ တနေ့သနှိုက် အမတ်မင်းသည် ဒရိုင်ဘာငကြောင်ကိုခေါ်ကာ အီသို့ မိန့်အိ။
အီကားအား သန့်ရှင်းလေးနေ့စဉ်လုပ်ရွေ့ ဆီရေလေ၀ိုင်စစ်ဆေးထားရန်၊ မနက်မိုးလင်းတိုင်း ဘက်ထရီချာချင် ၀င်စေရန် စက်နှိုးပြီး နာရီဝက်တစ်နာရီထားရန်၊ကားအင်ဂျင်အား တောက်ဝူး အဆင့်ရောက်အောင် အမြဲ တမ်း ဆောင်ရွက်ထားရန်၊ဘရိတ်အားနေ့စဉ်စစ်ဆေးပြီး တိကနဲနင်းရင် တုံ့ကနဲ မိအောင် ဆောင်ရွက်ထားရမည်ဟု မိန့်တော်မူအိ။ ဒရိုင်ဘာလည်းအမတ်မင်းဆိုသည့်အတိုင်း ကလိ (အဲ)လုပ်အိ။
အခါတစ်ပါးနှိုက် အမတ်မင်း၊ဇနီးနှင့်ခယ်မတော် တို့သည် ရှော့ပင်းထွက်ရာ ဒရိုင်ဘာမှ မောင်းပို့ရအိ၊ လမ်းသို့ ရောက်သော် ကားမောင်းသင်ပြီးစဇနီးသည်က မောင်းလိုပါသည်ဟု တစာစာ ပူစာအိ။ အမတ်မင်းလည်း အလိုလိုက်အိ၊ ဂွေနောက်တွင် ဇနီးသည်ထိုင်ရွေ့ ဘေးတွင် အမတ်မင်းကလိုက်ကာထိမ်းကြောင်းအိ။ ငကြောင်မှာကားနောက်ခန်းတွင် ခယ်မတော်နှင့် အတူထိုင်အိ။ မြို့တွင်းအရောက် ကားကွေ့ရန် အရှိန်လျှော့စဉ် ဒရိုင်ဘာ ကလိထားပြီးပြန်မကြပ်ရသေးသောမူလီပြုတ်ကျရွေ့ ဘရိတ်အုပ်မရဖြစ်လေအိ။ အမတ်မင်းလည်းဂွေကို လှမ်းကိုင်ရွေ့ ရှေ့မှလာသော ဂါလံခြောက်သောင်းဆီဘောက်ဆာကားများ၊ ယိုင်နဲ့နဲ့အကာတိုင်များကို ဂုံနီအိတ် ကြိုးဖြင့်ချည်ထားသော သစ်လုံးတင်ကားကြီးများနှင့် စည်ပင်မှ အမှိုက်သိမ်းကားများကို ဟိုရှောင်ဒီရှောင်လုပ်ရာ ကားမှာ ဟိုရမ်းရမ်းဒီရမ်းဖြစ်လေသော် ခယ်မတော်မှာ ဆီးဖြူငကြောင်အားကြောက်ကြောက်နှင့် ကြုံးရွေ့ ဖက်လေအိ။ ငကြောင်မှာ ခယ်မတော်အကြောက်ပြေစေရန် အားပေးသည့်သဘောဖြင့် ပြန်ရွေ့ ဖက်ရလေအိ။ နောက်ဆုံးတွင် ကားမှာ လမ်းဘေးရှိ မွေ့ယာခေါင်းအုံးရောင်းသောဆိုင်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ရပ်တန့်သွားလေ၏။ အမတ်မင်းနှင့် ဇနီးမှာလည်းအသက်ဘေးမှသီသီလေးလွတ်ကာအလွန်ထိတ်လန့်သွားရာ အသေမဦးခင် အကျင့်ဦးအောင်လုပ်တော့မည်းနှလုံးသွင်းကာ သာသနဘောင်သို့ဝင်ကြလေအိ။ ဆီးဖြူငကြောင်မှာကား ခယ်မတောအားသိမ်းပိုက်ရွေ့ အမတ်မင်းနေရာသို့ရလေအိ။
ငကြောင်ကား အတိတ်ဘ၀က ရဟန်းတစ်ဦးအား ထရေသောက်သောဝါးကျည်တောက်ဖြင့်သောက်ရေဆက်ကပ် ဖူးသော ငမူးကို အီပြည်တွင် အမတ်မင်းသုံးကြိမ်ဖြစ်လတံ့ဟူရွေ့ တောင်းဆုရဖူးလေအိ။ဗုံးကြီးကြီးဖြင့်သောက်အိ။ ငမူးဘ၀မှ စုတေလာသူဖြစ်ရွေ့လည်းအလွန်ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်အိ။အသောက်ကြူးအိ။မူးမတ်ဗိုလ်ပါတို့ကိုလည်း မူးမိုက် ဗိုက်ပူအောင်တိုက်အိ။ ၄င်းတို့လည်းမူးနေအောင်သောက်ရွေ့ ခစားလေကုန်အိ။
ထိုမင်းကား ဆီးဖြူအရပ်နှိုက် သခင်အိမ်တွင် စေပါခံနေရစဉ် သခင်ဖြစ်သူညှင်းပန်းဘူးသည်ကိုသတိရသော်လည်း အငြိုးမထားပဲ သခင်ကို ဘီအီး အမူးတိုက်အိ။ သခင်အမူးလွန်ကာ တစုံတခုဖြစ်ပါက သူ့အကြောင်းနှင့်သူဖြစ်အိ ဟု သဘောထားအိ။ သခင်နှင့်အသောက်တူသူတို့ အားလည်း အတူအမှောက်သောက်စေအိ။ သောက် သူများ အလွန်များရကား ဘီအီးမတိုက်နိုင်တော့ပဲ ဖောရှော ထွေးညို သာတိုက်တော့အိ။ ယခုလောကမှာလည်း ထိုအကြောင်းကိုထောက်ရွေ့ မိမိထံ စေပါခံရသောသူကိုပင်ဖြစ်စေ ငါ့အရက်ခိုးသောက်သူဟူရွေ့ မငြိုညင်သင့်၊ တစ်လုံးတန်သည်း တစ်ပုံးတန်သည် ပေးရွေ့သောက်စေသင့်အိ။ သတ္တ၀ါတို့အိ သောက်နိုင်အားကို အမြင်ဖြင့် မသိနိုင်။ အီသူကား တစ်လုံးသောက်နိုင်အိ၊အီသူကားနှစ်လုံးသောက်နိုင်အိစသည်မျိုးအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပိုင်းခြားခြင်းငှာတတ်ကောင်းသည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်ခပ်သောက်သောသူတိုင်းပင် သတိပြုထိုက်လှအပ်သည်။ ထို ဆီးဖြူငကြောင်ကား အမတ်မင်းစည်းစိမ် ငါးဆယ့်နှစ် နှစ်တိုင်စိုးစံရလေအိ။
အီသို့ ငကြောင် အမတ်ဖြစ်တော်မူမည် အချိန်နည်းတွင် ထိုသို့ဖြစ်ရအံ့သောအကြောင်းနှင့် လျှော်သော နမိတ် အိပ်မက်များကိုမြင်မက်ရသည်။ မြင်မက်သည့်အတိုင်းအတိုင်းလည်း အမတ်မင်းအဖြစ်သို့ရောက်လေသည်။ အီသည်ကိုထောက်ရွေ့ ယခုလောကမှာလည်း၊ အမတ်မင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊အရက်သမားအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဗုံးဖြင့်သောက်နိုင်သူ၊ဂါလံဖြင့်သောက်နိုင်သူ၊ ပုလင်းဖြင့်သောက်နိုင်သူ အမျိုးအစားအလိုက်၊ ဘီအီးသောက်နိုင်သူ၊ ဖောရှောထွေးညိုသောက်နိုင်သူဖြစ်လာတော့မည်။ ထိုဖြစ်ရအံ့သော အခြေနှင့်လျော်သော နမိတ် အိပ်မက်သည်အတိုင်းလည်း အမှန်ဖြစ်ရာသည်သာတည်း။
ထိုအိပ်မက်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ရွေ့ အင်တာနက်မှာ ဗဟုသုတရှာမှီးသူအပေါင်း သိရှိမှန်သားနိုင်စေရန် ပြုစုရေးသားတင်ပြလိုက်ရပေသည်။
ခွင့်ပြုချက်မယူပဲအမည်အသုံးပြုထားသည့်အတွက် အမတ်မင်းအားတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ အမတ်မင်း၏ခယ်မ(ရှိလျှင်)အားလည်းတောင်းပန်အပ်ပါသည်။
အမတ်စည်းစိမ် ၅၂ နှစ်ဆိုတော့
အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂ နှစ်-
ခေတ် ၄ ခေတ်တောင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တော့
အာဂလူလို့ပြောရမလား၊ အကပ်တော်တယ်ပြောရမလား၊ ခုံမြဲတယ်ပြောရမလား
ဆရာချိုရေ စလေငခွေးက ၂၅ နှစ်ဆိုလို့ ၅၂ နှစ်လုပ်လိုက်တာ။ စရေးကတဲက ငခွေးနဲ့ယှဉ်ပြီး ကပေါက်တိကပေါက်ချာရေးထားတာ၊ တကယ်ထောက်ချင့်ကြည့်ရင် အပိုင်းတစ်အစမှာရေးထားတဲ့ ခုနှစ် သက္ကရာဇ် တွေနဲ့ စာပါအကြောင်းအရာတွေက အတော်ကိုလွဲချော်နေတာဗျ။ သည်းခံပြီးသာဖတ်ကြပါတော့…. ခွစ်ခွစ် ။
ပုရောဟိတ် ကြောင်ကြီး ဘယ်ရောက်သွားတုန်းကွ…။ ပုရောဟိတ်ဂဒေါ် ကြေးမုံဂျီး လက်ချက်နဲ့ အသက်ထွက်သွားပြီလား..။ ဖမ်းကွာ ကြေးမုံဂျီးကို…
ကတုံးကြီးနှင့် အမတ်မင်းကိုမြင်ယောင်ရွေ့ ဆီးဖြူငကြောင် သိမ်းပိုက်သွားသောခယ်မလေးအားလည်း သနားမိပါအိ။